Home / latestnews / Al shabaab oo sheegtay in weerarkii Barawe ay ka danbeeyeen Britain iyo Turkish iyo Labadaasi dal oo jawaab kabixiyay arintasai	Al shabaab oo sheegtay in weerarkii Barawe ay ka danbeeyeen Britain iyo Turkish iyo Labadaasi dal oo jawaab kabixiyay arintasai
Kooxada Al shabaab ayaa sheegtay in weerarkii xalay ka dhacay degmada Baraawe ee Gobolka Shabeelada Hoose ay mas uuliyadiisa lahaayeen dawladaha Britain iyo Turkiga iyagoo intaasi ku daray in weerarkaasi looga dilay hal askari oo kamid ah Ciidamadooda isalamrkaana ay iyagu weerarka ku dileen mid kamid ah ciidamada Britain kuwo kalena ay ku dhaawaceen.
Afhayeenka wasaarada Difaaca ee wadanka Britain ayaa sheegay in aanay waxba ka ogayn wax Britain ah oo weerarkaasi ku lug lahaa , halka sarkaal wasaarada arrimaha dibadda Turkiga u hadlayna uu arrintaasi beeniyay, isagoo yiri Turkiga kama qayb qaato weerar noocaas oo kale ah.
Sarkaal ka tirsan Qaybta nabad suggida ee Dawlada Soomaaliya ayaa waxaa uu sheegay in Weerarka lagu qaaday degmada baraawe oo ah xarunta Ugu weeyn ee Al shabaab ay u jeedadiisu ahayd beegsiga Hogaamiye u dhashay waanka Jeejniya Kuna sugnaa Dhisme ku yaala aagagaarka xeebta , Iyadoo taliyahaasina la dhaawacay , mid kamid ah ilaaladiisina goobta lagu dilay.
Sarkaalkaasi ka tirsan Nabad suggida dawlada ayaa sheegay in tirada dadka lagu dilay halkaasi gaarayso ilaa todobo ruux, lamina oga in weerarkaasi uu la xiriiro weerarkii suuqa Westgate 21 kii Septembet lagu qaaday iyo in kale .
Weerarada noocaan oo kale ah ayaa waxaa lagu yaqaanaa in ay qaadaan Ciidamada Mareeykanka iyo Kuwa faransiiska balse faransiiska sarkaal u hadlay waa uu beeniyay in ay ciidamadodu ku luglahaayen halka wasaarada gaashaandhiga mareeykankuna ay diiday in wax faalo ah ka bixiso.
Shiikh Cabdul casiis Abu Muscab oo ah Afhayeenka Dhinaca Milatariga Al shabaab oo la hadlay wakaalada wararka ee Reuter ayaa sheegay in weerarka ay soo qaadeen ciidamo Ajnmabi ah oo ka soo dagay dhinaca Xeebta baraawe oo ah 180 KM ( 110 Mile) koonfur kaga began Magaalada Muqdisho, islamarkaana ay weerar la beegsadeen ciidamada ilaalada Al shabaab ee sal dhigoodu yahay dhanka Xeebta.
Goor danbe oo galabta ahayd oo uu Abuu Mascab hadlay ayuu sheegay in Weerarka ay fuliyeen Cutubka SAS ee wadanka Biritain iyo Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee wadanka Turkiga , iyagoo goobta weerarka ku dilay taliyihii Ciidamada Britain , afar kalena ay ka six un uga dhaawaceen, waxaa kale oo uu Abuu Muscab intaasi ku daray in askari Turkish u dhashay ay isagana dhaawaceen.
Nabad sugida iyo saraakiisha Booliiska Soomalaiya.
Saraakiisha Amaanka ee wadanka Soomalaiya ayaa waxaa ay bixinayana warar iskhilaafsan kuwasi oo la xiriira sidii ay wax uga dhaceen Degmada baraawe , qaar ayaa waxaa ay leeyihiin’’ waxaan Ogaanay in Ciidamada faransiisku ay dhaawaceen Abuu dayid oo sidoo kale loo yaqaano Abuu Cayid oo ah Hogaamiye Al shabaab oo ka socda wadanka Jeejniya .
Saraakiishu waxaa kale oo ay yiraahdeen Ciidamada faransiisku waxaa ay dileen Ninkii ilaalada u ahaa Abuu Diyad kaasi oo sidoo kale ahaa ajnabi, Muhiimada weerarkuna waxaa uu ahaa Hogaamiyaha Al shabaab ee u dhashay wadanka Jeejniya oo qayb ka ahaa wadan weeynihii la isku oran jiray Midawgii Soofiyeeti.
Gaashaanle sare Cabdul qaadir Maxamed oo ah Sarkaal sare oo katirsan Ciidamada Booliiska aya awaxaa uu sheegay in ka sokoow warka jaraa id ee ay bixiyeen Al shabaab eek u saabsan cadaynta Cida Weerarka , hadana waxaan aaminsanahay in weerarkaasi ay fuliyeen Ciidamada Mareeykanka oo beegsanayay sarkaal sare oo ajnabi ah kana tirsan xarakada Al shabaab.
Nin maaciisa ku sheegay Maxamed lana hadlay wakaalada wararka Reuters ayaa sheegay in Todobo qof ay ku dhinteen weerarka oo uu ku kala tilmaamay in ay kala ahaayeen Shan qof oo katirsan Al shabaab iyo laba kamid ah ciidamadii weerarka soo qaaday.
Isbahaysiga Nato ayaa beeniyay ku luglahaan shiyaha weerarkii Barawe iyadoo abuu muscabb oo qaabka weearraku u dhacay ka hadlay sheegay in Weerarka aanay wax diyaarado dagaal ahi ka qayb qaadanin, ‘’ Weearar yahanadu waxaa ay goobta uga carareen hub , daawooyin iyo baro dhiig ah ayuu sii raaciyay, waxa kaliya oo ay nagu soo weerareen waa doomo iyadoo uu nooga shahiiday mid kamid ah askarteena.
Dadka Deegaanka Baraawe.
Dadka dagan Baraawe ayaa sheegay in dagaalku qarxay 03:00 AM ee saqdii dhexe , ‘’ Xabado cul culus ayayny ku kacnay , waxaanu u malaynaynay in la qabsaday saldhigi al shababa ay ku lahayd dhanka xeebta ayay tiri Samira Nuur oo ah hooyo haysata afar caruur ah oo la hadashay wakaalada wararka ee Reuters.
Bishii January ee sanadkaan ayaa ciidamada Komaandooska faransiiska oo wata diyaaradaha helikobtaris ka ah aya awaxaa ay isku dayeen in ay soo badbaadiyaan Askari ka tirsanaa ciidamada Sirdoonka Faransiiska halkaasi oo looga dil;ay laba kamid ah Ciidamadii Komaandooska ee soo duulay, waxaana xarakada Al shabaab goordanbe sheegeen in ay toogasho ku fuliyeen Askarigii laanta sirdoonka ka tirsanaa.
Xarakada Al shabaab oo ah dhaq dhaqaaq diimeed xoogbadan ku leh gudaha Soomaaliya ayaa waxaa ay sheegteen Weerarkii todobaadyo ka hor lagu qaaday Suuqa Westgate mall ee magaalada Nairobi oo ay ku dhinteen 67 qof .
Xaafiiska Wararka Xogtanews London.
tweet Previous: Somali militants say Western forces raid base and kill fighter
Next: SH UMMAL OO KA JAWAABAY HANJAABAADII AL SHABAB 05 2013
FAAH FAAHIN: Howlgal Burcad sifeen ah oo maanta ka dhacay Sh/Hoose
DEG DEG: Weerar Culus oo lagu qaaday Fariiso ay Shabaab ka joogeen Gedo
DFS & Odoyaal dhaqameedyo ka wada hadlay Xaalada Xasan D.Aweys
156 comments	Pingback: mark wintsman
Pingback: lsat analytical reasoning help
Pingback: integrated algebra help
Pingback: womenï¿½s winter hats 2013 2014
Pingback: flowers lisburn
Pingback: mspy discount code
Pingback: statistics videos
Pingback: sat math dvds
Pingback: calculu 2 help
Pingback: how do i get rid of back acne fast
Pingback: new york graffiti
Pingback: Chicago Appraiser
Pingback: Edison Escovar
Pingback: math tricks
Pingback: increase your gas mileage
Pingback: pre algebra videos
Pingback: what type of braces should I take
Pingback: medical dosages help
Pingback: calculus 1 videos
Pingback: praxis 0069 videos
Pingback: sat math subject test
Pingback: Work from Home Training
Pingback: garcinia cambogia extract legit
Pingback: Popular Homepage
Pingback: buying amoxil
Pingback: phytoceramides 350 mg
Pingback: Real Estate Personnel
Pingback: Asbestos removal contractors glasgow
Pingback: Venus Muszar
Pingback: Sarandi Putas
Pingback: Russian Virgin Hair
Pingback: party city casino decorations
Pingback: amoxidal plus alcohol Here
Pingback: figurines of characters from movies
Pingback: GoGo Rocket
Pingback: Is Social Media Affecting Your Credibility
Pingback: backpacking sleeping bags
Pingback: how to market your law firm
Pingback: gopro cam
Pingback: Ambient pharma logistics
Pingback: chase.com log on
Pingback: Facebook Beratung